Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguSimona
Le yindlu yangasese ejikelezwe ngamaplanga kunye nendalo emangalisayo. Indlu ibekwe kwicala elinelanga lepropathi, inedama lokuqubha langaphandle apho unokupholisa khona ngeentsuku ezishushu zasehlotyeni kunye nendlu yemithi apho unokuchitha khona ubusuku.
Indawo yokutshaja kwakhona.
Indawo yoku (re) ukuvutha uthando lwakho.
Le yindlu yangasese ejikelezwe ngamaplanga kunye nendalo emangalisayo. Indlu ibekwe kwicala elinelanga lepropathi, inedama lokuqubha langaphandle apho unokupholisa khona ngeentsuku ezishushu zasehlotyeni kunye nendlu entle yemithi apho unokuchitha khona ubusuku.
Ukuba unethamsanqa ungakonwabela umbono wexhama eliwela idlelo ngexesha lekhefu lekofu yasekuseni, kwaye xa uhambahamba emahlathini, kukho imivundla kunye noonomatse oza kubonwa. Kukho amakhowa amaninzi kule ndawo kwaye ungakha amaqunube amnyama kwipropati. Into entle ukuyenza ngokuhlwa kukujonga amadangatye eziko uphunga iwayini enkulu yasekhaya okanye ujonge nje iinkwenkwezi ezingenakubalwa esibhakabhakeni.
Indawo ikude kwaphela, ibucala kwaye ikwimizuzu emihlanu kuphela yokuqhuba ukuya kwezona ndawo zokutyela zikufutshane nakwiivenkile ezinkulu. Kukho uluhlu olubanzi lweendawo zabakhenkethi kunye nezinto ezinomtsalane ngaphakathi kweradiyasi yemizuzu engamashumi amabini yokuqhuba kwikhabhini.
Uya kuziva ukhululekile, umhle kwaye unokuthi phantse unjengengelosi emva kotyelelo lwakho ... wamkelekile kwiCradle Of Love.
4.97 ·Izimvo eziyi-33
4.97 · Izimvo eziyi-33
Ikhabhinethi yimizuzu emi-5 ukusuka edolophini apho unokufumana zonke igrosari kwaye utye i-aa yokutyela, uchebe iinwele okanye uphethise imoto yakho ukuba uyathanda :) Kukho iicawa ezintle kunye nemyuziyam ukujonga e Šmarje pri Jelšah . Kukuhambo lwemizuzu eli-15 ukuya kwindawo ekufutshane ye-spa ePodčetrtek naseRogaška Slatina.
Umbuki zindwendwe ngu- Simona
Singachitha ixesha nawe ukuze sikunike iingcebiso zasekhaya kwaye sincome iindawo onokuzibona, kodwa ukuba ufuna ukushiyeka wedwa, oko kulungile kuthi.